Sawirro-USAID oo sheegtay in waqooyiga gobolka Mudug yahay dhul lagu muransan yahay. – Radio Daljir
Sawirro-USAID oo sheegtay in waqooyiga gobolka Mudug yahay dhul lagu muransan yahay.
Luulyo 30, 2016 2:08 b 0
Minneapolis, July 30 2016–Magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa waxaa shir ku dhexmaray Hay’adda USAID iyo Ururka IANA (Islamic Association of North America), waxaana laga qaybiyey jaantusyo muujinaya in waqooyiga gobolka Mudug yahay dhul lagu muransan yahay.
Waqooyiga gobolka Mudug oo ay maamusho Puntland ayaa Hay’ada USAID waxa ay sheegtay inuu yahay dhul lagu muransan yahay ayna isku hayaan sida ay sheegtay Puntland iyo maamulka Galmudug.
Warar hoose oo warbaahintu heshay ayaa sheegaya in shaqsiyaad katirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ay ka dhaadhiciyeen Hay’ada USAID, in Puntland iyo Galmudug ay isku haystaan waqooyiga gobolka Mudug.
Nabadoon lagu caleemasaaray duleedka degmada Burtinle.
Madaxweyne Erdogan oo eedeeyey saraakiil American ah.